Iyo Battlefield saga inosvika pane iOS uye Android muna 2022 | IPhone nhau
Iyo Battlefield saga inosvika pane iOS uye Android muna 2022
Ignacio Sala | 24/04/2021 12:00 | IPhone mitambo
Mushure memakore angangoita maviri ekumirira, mazuva mashoma apfuura vakomana veDepawn vakapedzisira vazivisa gwara remugwagwa rekutanga iyo kurwa royale Apex Legends pane nhare mbozha. Asi zvinoita sekudaro hachizove icho chete chinyorwa chinowanikwa pasi peElectronics Arts amburera iyo ichaitawo kumhara kwayo pamusoro pemhasuru.
EA yakazivisa kuti panosvika 2022, ichavhura Nhandare yehondo nharembozha. Uyu wekutanga-munhu shooter anojoinha ese maviri Apex Legends uye Call of Duty Mobile, PUBG uye kana zvinhu zvikagadziriswa neEpic, zvakare Fortnite, kunyangwe izvi zviri mumunhu wechitatu, isu tinogona zvakare kuzvifunga mukati mebhegi rimwe chete.
EA yakazivisa kuburitswa kuri kuuya kuburikidza nesitatimendi iyo yazvinoti iye anovandudza anotarisira kuburitsa mutambo uyu maindasitiri Matoyi.
Oskar Gabrielson, CEO weDICE anoti:
Usaita chikanganiso: iwo mutambo wakazvimirira. Mutambo wakasiyana zvachose neuyo watiri kugadzirira yekunyaradza uye PC, yakagadzirirwa chaizvo nharembozha. Iri kugadzirwa kubva pakutanga ne IToys kugadzira nzvimbo yekurwira inogona kutamba chero kupi uye iwe unogona kutarisira yakasarudzika hunyanzvi-hwakavakirwa ruzivo. Uyu mutambo we mobile uri kupinda munguva yekuyedza kuvhurwa kwegore rinouya, saka tinotarisira kuve nerumwe ruzivo munguva pfupi.
Zvinotaridza kuti mune Zvemagetsi havadi kuunza imwecheteyo yemitambo chiitiko kune nhare mbozha kutevera imwe nzira. Ose maviri PUBG neFortnite anotendera iwe kuti utambe mepu dzakafanana uye nekupa iwo mumwe mutambo wemitambo mumashandisirwo avo enhare, zvakasiyana Kudevedzwa Pabasa: Nhare ine hondo royale mepu haina chekuita neshanduro yePC uye zvinonyaradza.
Mazuva mashoma apfuura DICE yakazivisa kuvhurwa kweBattlefield 6 yekupera kwegore rino. Mazhinji runyerekupe rwekuti kusvetuka muhunhu nemakanika avanoda kupa neiyi nyowani nyowani zvimwe siya zvese PlayStation 4 uye Xbox One, kunyange pasina chinhu chakasimbiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Iyo Battlefield saga inosvika pane iOS uye Android muna 2022
AirTag haina kuitirwa kuteedzera vana kana zvipfuwo maererano neApple
Iyo iPhone 11 uye iPhone 12 inotonga musika weUS sekureva kweVatengi vehungwaru Tsvagiridzo Vashandi